Faah faahin kasoo baxeysa dil ka dhacay Suuqa Weyn ee Bakaaraha ee Muqdisho
You are at:Home»Warkii oo Dhan»Wararka»Faah faahin kasoo baxeysa dil ka dhacay Suuqa Weyn ee Bakaaraha ee Muqdisho
Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa Kooxo hubeysan oo Odayaal dhaqameed ku dilay Suuqa weyn ee Bakaaraha ee Magaada Muqdisho ee Caasimada Dalka.
Goob jogayaal ayaa sheegay in dilka uu ka dhacay naxwaaxiga Xaafadda Nationka ee Suuqa Bakaaraha,waxaana la sheegay in dabley ku hubeysanaa bastoolado ay toogteen labbo Odayaal dhaqameed oo mid kamid ah uu ku sugnaa Bakhaar ah uu lahaa.
Dableydii dilka ka dambesay ayaa sida cadaada aheyd goobta ka baxsaday,waxaana la tilmaamay in dilka kaddib ay ciidamo katirsan dowladda ay goobta gareen.
Labada Oday ee la dilay ayaa waxaa lagu kala Magacaabi jiray Axmed Muxumud Aadan & Axmed Sheekh Cabdullaahi Fiqi Cumar, kuwaas oo degaan ahaan kasoo jeeda degaanka Bacaadweyne ee Koonfurta Gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Wali ma jirto Cid sheegatay Mas’uuliyada dilkan,walina laamaha amniga ee dowladda soomaaliya kama aysan hadlin dilka halkaasi ka dhacay,waxa ka soo baxay howlgalka ay sameyeen.
Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku soo badanayay dilalka qorsheysan ee loo geysanayo Mas’uuliyiinta katirsan Dowladda,Ciidamada iyo dadka indheer-garad u ah Bulshada Soomaaliyeed,mana jirto ilaa iyo hadda ifa-faalo muujineysa cid loo soo qabtay dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho.